galvanized ígwè eriri igwe Factory | China kpaliri ígwè eriri igwe Manufacturers, Suppliers
mgbochi mkpịsị aka GL galvalume ígwè eriri igwe maka roofing Ibé akwụkwọ
55% AL-ZN na-ekpuchi nchara nchara bụ nchara nchara etinyere na abụọ na aluminom-zinc alloy na mejupụtara nke mkpuchi, 55% aluminum, 43.4% zinc na 1.6% sịlịkọn. Nguzogide nguzogide magburu onwe ya nke Aluzinc sitere na ihe omuma nke ihe abuo abuo: ihe ngbochi nke aluminom di n'elu nkpuchi na nchedo nke àjà nke zinc.
oyi akpọrepu ígwè eriri igwe oyi akpọrepu full ike ígwè ike
Oyi juru nchara ígwè a na-emepụta site na ị tụtụkọta eriri igwe na-ekpo ọkụ wee tụgharịa ya n'otu n'otu na ọnọdụ okpomọkụ kwesịrị ekwesị na ọkpụrụkpụ. Ọ nwere nhazi ihu igwe dị mma yana akụrụngwa akụrụngwa maka ojiji na ngwa ngwa na ngwa elektrọnik.
agba dị ka GI GL PPGI PPGI dị iche iche na-eme ka a na-agba nchara ígwè maka mkpuchi ụlọ
E webatara CCL (Agba mkpuchi agba) akụrụngwa na teknụzụ niile sitere na Japan Nippon, ndị na-edozi onwe ha na-ezute ENRO-STANDARD. ọ nakweere mkpuchi ala atọ, mkpuchi abụọ na-ehicha abụọ, ihe mkpuchi kachasị dị obosara bụ 1450mm. enwere ike nweta ihe dị iche iche dị elu. Agba na nkọwa ndị ọzọ nwere ike ịdị n'elu arịrịọ ndị ahịa.
na-ekpo ọkụ tinye zinc ntekwasa galvanized ígwè eriri igwe
Ekpo ọkụ-ịgbanye GALVANIZED m-doo na-akpọ na-ekpo ọkụ-itinye kpaliri m doo ma ọ bụ na-ekpo ọkụ itinye zinc doo na-mikpuru mgbe nchara steelh-500 Celsius gbazee na zinc, ibé jikọtara zinc oyi akwa n'elu, na-eje ozi dị ka antiseptik nzube, adabara niile iche iche nke acid na alkali alụlụ na gburugburu corrosion ndị ọzọ